शकुनि भतिज (कथा) – Chitwan Post
शकुनि भतिज (कथा)
उनी रामनाथ सर, २०३३ सालमा तनहुँ जिल्लाको एसएलसीको पहिलो ब्याच । उनले आईए पढ्ने सोच बनाएका थिए, तर घरको अवस्थाले उनले पढ्न पाएनन् । पाँच दाजुभाइ र दुई बैनीहरुमध्येका उनी जेठा । भाइबैनी सानै थिए, एकाघर परिवारको जिÞम्मेवारी उनकै थाप्लोमा थियो । आफ्नो पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि उनले घरायसी कारणले जागिर खानुपर्ने बाध्यता भयो ।
प्रवेशिका परीक्षा पास गरेसँगै काठमाडौँको दौडाहा टोलीमार्फत जिल्लामा पहिलोपटक खुलेको लोकसेवाको परीक्षामा सामेल भए । १९ वर्षका ती लक्का जवान अन्तर्वार्तामा जेनतेन नाम निकाले र घरपायक मिल्ने गरी दमौली बजारको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा खरिदारको नियुक्ति मुकाम गरिए ।
इमानदार र निष्ठाका प्रतिमूर्ति उनी जनताकै हितमा निस्वार्थ सेवा गर्दागर्दै एकचालिसौँ वसन्त पार गरे । स्वैच्छिक अवकाशको समय आयो । ६० वर्षे उमेरको हद लागी सेवाबाट अनिवार्य निवृत्त भएसँगै ऊर्र्जाशील उमेरको आधा अवधि एउटै छानोमुनि जनसेवा गरेर बिताए ।
जागिरको दोस्रो साल २१ वर्षको उमेरमा लमजुङ, बेसीँशहरकी पौडेल थरकी कन्यासँग मागी विवाह गरे । बाँसका मुनाजस्ता दुई सन्तान भए । दाजुभाइ छुट्टिँदा पाएको पुख्र्यौली ५ रोपनी पाखो जग्गाले के खान पुग्थ्यो र ! तापनि जेनतेन बच्चाहरुलाई राम्रो स्कुलमा पढाए ।
तलब आधाभन्दा बढी त केटाकेटी पढाउने र घरखर्चमा नै सकिएको थियो । तैपनि, जागिरको १० वर्षपछि ऋणधन गरी घडेरीको रुपमा बजारनजिकै ३ आना जग्गा जोडे । त्यो तीन आना जग्गा उनको कमाइको पहिलो र अन्तिम अचल सम्पत्ति थियो । कर्तव्यपरायणताको उच्च नमुना उनी सेवा अवधिभर कसैको एक पैसा घूस लिएनन् । कसैको कुभलो चिताएनन् । उनको यो निष्पक्ष सेवाले उनका मित्र धेरै बढ्न गए । सबै भन्ने गर्थे– कर्मचारी हुन् त रामनाथजस्तै होऊन् । यस्ता सज्जन कर्मचारीले मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ । सबैका आदरणीय थिए त्यसैले सेवाको अन्तिम दिन ठूलो सम्मान पाए । बिदाइमा सबैका आँखा रसिला थिए ।
लामो सेवा कालपछि पेन्सनबाट निस्कँदा बचेको बिरामी बिदा र अन्य सुविधाहरुको एकमुस्ट रकम १० लाख हात पारे । मूल्य र मह¤वमा त्यो १० लाख उनका लागि १० करोडबराबर थियो । त्यो रकम जिन्दगीभर कलम घोटेर, दिनरात नभनी रगत–पसिना भिजाएर सेवा गरेर पाएको मूल्यवान् सम्पत्ति थियो । सरकारले सार्वजनिक सेवा गरेबापत बाँकी निवृत्त जीवन सहज र सुखद होस् भनी दिएको जिउनी थियो । बुढेसकालमा जिउने र खर्चिने कसैको हक नलाग्ने नितान्त निजी रकम थियो त्यो । हातमा कहिल्यै ठूलो रकम नदेखेका उनी त्यो १० लाख हालसम्मको मौजुदा बचत थियो । उनले अब आफ्नो बुढेसकालको सहारा त्यही पैसालाई मानेका थिए । जागिरको अन्तिम दिन आफ्ना स्टाफ साथीहरु र केही आफन्तले सुझाएबमोजिम सबै रकम विश्वासिलो बैंकमा फिक्स खाता खोलेर त्यसबाट आउने मासिक व्याजबाट घरखर्च र जीवनवृत्ति चलाउने उनको सोच थियो ।
पल्लो घर साँध जोडिएको आफ्नै भाइको छोरा ३० वर्षे भतिजो छट्टु लक्का जवान थियो । ऊ केही पढेको तर जागिर नपाएको बकुलन्ठु तिघ्रे । कमाइधमाइ नभए पनि व्यस्त जीवनशैलीको रवाफ फुक्दै मोटरसाइकलमा दिनभर बजार चहार्ने उसको दैनिकी थियो । दौरा न सौरा को खल्ती । आम्दानी शून्य खर्च हजार । महिनामा आधा काठमाडौँ आधा तनहुँ गर्दथ्यो । काम पनि छैन फुर्सद पनि छैन । काठमाडौँको महँगी, पकेट खर्च, कोठा भाडा र अर्धांगिनी पाल्ने बजेट त चाहियो । आम्दानी शून्य, त्यसैले चोर बुद्धि बुन्यो र ठूलोबाको नगद सम्पत्तिमा गिद्धे आँखा लगायो ।
— ‘ठूलोबा, तपाईंले पाएको दस लाख मलाई दिनू, म दुई वर्षमा दोब्बर हुने ठाउँमा राखिदिनेछु । त्यसलाई खेलो गरि सजिलै दोब्बर बनाउन सकिन्छ । शेयरमा लगानी गरेमा दसको बीस पक्का । बैंकमा राखेर के गर्ने, अलिकति पनि हुँदैन ।
बिचरा ठूलोबा, आफ्नै भतिजोलाई कसरी अविश्वास गर्नु ! छलकपट र चतु¥याइँ के हो नजानेका ती सोझा ठूलाबाले छिट्टै पत्याइहाले र जिन्दगीको सम्पूर्ण कमाइको त्यो थैली ‘दोब्बर हुने’ को लोभमा पत्नी र छोराछोरीलाई पनि एक बचन नसोधी सुटुक्क भतिजोलाई खर्लप्पै सुम्पिदिए । यसरी चतुर र शकुनि भतिजोको जालमा सोझा ठूलोबा सजिलै फस्न पुगे ।
आज साउनको महिना, दुई दिन भयो तनहुँमा लगातार झरी परिरहेछ । दैवको खेल, अकस्मात् बूढाको जीवनमा ठूलो बज्रपात आइलाग्यो । परारको भूकम्पले गलेको त्यो घर आजको साउने झरीले गल्र्यामगुर्लुम ढल्न पुग्यो । निष्ठुरी झरीले बासै उठ्ने गरी उनको गुँडै भत्काइदियो । बिचरा सर विचलित हुन पुगे ।
आश्वासन र लोभले सबै नगदे थैली भतिजलाई बुझाएका उनीसँग नयाँ घर निर्माणको लागि लाग्ने पैसा कत्ति पनि थिएन । भतिजोलाई बिन्ती गरे, तर सबै पैसा मनोरञ्जनमा र घुमेर–खाएरै सकेछ । यस्तो बज्रपातमा माग्दा छैन भन्दियो । लगानी गरिदिन्छु भन्ने उसको आश्वासन झूटो र रकम फुत्काउने बहाना रहेछ । उल्फाको धन न प¥यो, त्यसैले महाको चण्डाल भतिजोले सबै पैसा बिन्दास पाराले खरानी बनाएछ । ‘लोभले लाभ लाभले विलाप !’ निरीह ठूलोबा लगानीबाट नाफा निकाल्छु भन्ने भतिजोको ‘सुकी व्याजको’ नौटङ्की जालमा चुर्लुम्म फस्न पुगे र अन्तमा घरबारविहीन भई नजिकैको स्कुलमा शरणार्थी हुन पुगे । के गर्ने, भतिजो त साँच्चैको शकुनि पो रहेछ !
(चितवन, हाल : सिड्नी, अस्ट्रेलिया)
कृति समीक्षा ‘गजलको धुन’मा बहकिँदा
हाम्रो माइतीको साधारण सभा
‘हंस’लाई पद्मश्री पुरस्कार, प्रश्रितलाई सम्मान
शान्तिको ‘ग्रिन टावेल’ बजारमा
तालुखुुइले : रसेटोको रापमा [निबन्ध]